တရုတ်ဟူဘေး Shengyu အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ - Glass ကိုဖိုင်ဘာဗဓေလသစ်ခေါင်မိုးစာရွက် RY720-B ကိုအားဖြည့်
FOB စျေး: 5.65-9.99 / စတုရန်းမီတာ
Geloy ASA ဗဓေလသစ်နှင့်အတူ coated Shengyu ဒြပ်ဗဓေလသစ်ခေါင်မိုးစာရွက်, အထူး 3-layer ကို Co-extruded ခေါင်မိုးစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာအမိုးတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသောကြောင်းအလင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါကြွယ်ဝသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူပုံစံထောင့်ကွက်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ esthetic အချက်လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိလည်းသုံးနိုင်တယ်, လေနှင့်မိုးသီးကိုခံနိုင်ရည်အလွန်ကြံ့ခိုင်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါဖြစ်ပါသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, က Ultra-ခရမ်းရောင်ဓါတ်ရောင်ခြည်, damp, အပူ, Chilling နှင့်သက်ရောက်မှုအောက်မှာအရောင်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအတွက်တည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။
3.0 ± 0.1mm 720mm 640mm 660mm (219 ၏ကိန်းမျိုးစုံ) လိုအပ်သောအဖြစ် 0.1kg ± 6kg မက်တီသို့မဟုတ်ရတဲ့အရာတွေ အပြာ, တောက်ပနီ, Gray, နက်ရှိုင်းသောအနီရောင်, ရှေးဟောင်းစစ်သည်တော်များ၏ရုပ်တု
အပေါ်ဆုံးအလွှာပစ္စည်းအဖြစ်, GE ဖွငျ့ Geloy အင်ဂျင်နီယာဗဓေလသစ်ပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်အလွန့်အလွန်သင့်လျော်သည်။ တောင်မှ Ultra-ခရမ်းရောင်ဓါတ်ရောင်ခြည်, damp, အပူ, Chilling နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိတွေ့, ထုတ်ကုန်အရောင်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ၏တည်ငြိမ်မှုရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အရီဇိုးနားနှင့်ဖလော်ရီဒါ၏အိုမင်းခြင်းဟာစမ်းသပ်ခြင်းစင်တာတွင်ကျင်းပစမ်းသပ်မှုကြောင့် 10 နှစ်အတွင်း E ကို5△ထက်လျော့နည်းသကျသပွေ။
Shengyu ဒြပ်ဗဓေလသစ်ခေါင်မိုးစာရွက်မိုးသည်းထန်စွာဖြစ်စေသောစပါးများအတွက်ခိုင်မာသောစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ ရှန်ဟိုင်းစည်ပင်သာယာအဆောက်အဦးပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းအရည်အသွေးကြီးကြပ်ရေးနှင့်စမ်းသပ်စခန်းအားဖြင့်ကောက်ယူအဆိုပါစမ်းသပ်မှု, ဝန်လျှောက်ထား 660mm ထောက်ပံ့ span နှင့် 150kg ၏အခွအေနေမအက်ကွဲရှိကွောငျးထေူ၏။
720mm ခေါင်မိုးစာရွက်တစ်ခုမှာစံအပိုင်းအစ 5.9 ± 0.1kg အလေးချိန်။
နောက်တစ်ခု: အမြင့် temperatuer & ချေးခုခံခေါင်မိုးစာရွက်
ကိုင်တွယ်စဉ်အတွင်းထုတ်ကုန်ထိခိုက်သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်မျက်နှာပြင်ကုပ်ခြစ်ရှောင်ရှားရန်ချခြင်းကိုခံရသည်မပြုရပါ။ ကြာကြာ 8 မီလီယံထက်တစ်ခုတည်းစာရွက်အဘို့, လုံလောက်အောင်ပံ့ပိုးမှုမှတ် tile ကို၏လောင်သောအသံရှောင်ရှားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
installation Tools များ
အရမ်း tightly.Finally တင်းကျပ်စွာ screw နှစ်ခုပေါ်သို့ရေစိုခံအဖုံးတွန်းဆွဲထားကြ၏မရရ roof.The screw နှစ်ခုကိုပြုပြင်တာတွေရှေ့တော်၌ထို gasket သို့ရော်ဘာရေစိုခံလက်စွပ်စုဝေးပေးပါ။
screw နှစ်ခု 6.3mm ၏ 75mmand အချင်း၏အရှည်နှင့်အတူ surface.Screws အဓိက tile ကို fix လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်စာရွက်မှဒေါင်လိုက် fixed ရမည်ဖြစ်သည်။
Shengyu စေးစာရွက် 20 မှ 80.For ဤအကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်. ကွင်းခေါင်မိုးကွင်းသက်ဆိုင်ဖြစ်ကြောင်း, အထူးအစီအမံတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းယူရပါမည်။
ဟာကုန်းပတ်၏ Surface ကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သင့်ကြောင်းကုန်းပတ်၏ပစ္စည်းကိုသေးငယ်တဲ့ပုံပျက်သောအမျိုးဖြစ်သင့်ကြောင်းကုန်းပတ် (ထို purlin span အရ) ဦးထက်ပို 12mm အထူဖြစ်သင့်သည်။
နှစ်ခုကုန်းပတ်အကြားတစ်ဦးက 3-5mm ကွာဟမှုပုံပျက်သောအဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
အဆိုပါရေစိုခံလိပ်တိကျမှန်ကန်ထပ်နှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ဒေါင်လိုက် unrolled ရပါမည်။
Ali သံမဏိ Anti-ချေးကုသဖြစ်သင့်သည်။
ဟာ embedded INSERT နှင့် purlins အလွန်သပ်ရပ်ခြင်းနှင့်လေယာဉ်အတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်နေချိန်မှာကွန်ကရစ်၏ underlay, ခေါင်မိုး၏ညနေခင်းတွင်အဘယ်သူမျှမအလွန်အရေးပါသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးသံမဏိနှင့်သစ်သား embedded INSERT နှင့် purlins ခေါင်မိုးဖွဲ့စည်းပုံ၏ဘဝတိုးချဲ့ဖို့ကုသ Anti-ချေးဖြစ်သင့်သည်။
သံမဏိ purlins သံမဏိ embedded INSERT နှင့်သစ်သား purlins မှ welded ရပါမည်တိုက်ရိုက်သစ်သား embedded INSERT မှရိုက်နိုင်ပါသည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု, အဘယ်သူမျှမခေါင်မိုး tile ကိုလုံးဝသူ့ဟာသူရေစိုခံတာ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်, သာမန်အိမ်များအဘို့, underne ရှိသင့်တယ်
1. Anti-ချေးကုသမှု: သတ္တု purlins Anti-သံချေးဆေးသုတ်တွေထဲကအလွှာများနှင့်ပြီးသွားအင်္ကျီနှစ်ခုအလွှာနှင့်အတူ coated ရပါမည်။ သစ်သား purlins Anti-ချေးသို့မဟုတ်ကတ္တရာဆီနှင့် coated ရပါမည်။
2. အဆိုပါထိပ်တန်း purlin သည့်ခေါင်အုပ်ကြွပ် install နိုင်ရန်အတွက်ခေါင် line ကနေ 180mm အကွာအဝေးရှိသင့်ပါတယ်။
3. အောက်ခြေ purlin အဆိုပါ eave ထံမှ 50-70mm အကွာအဝေးရှိသင့်ပါတယ်။
4. purlin အာကာသတော်ဝင် Tile များအတွက် 660mm ဖြစ်ပါတယ်။
Shengyu ဗဓေလသစ်ခေါင်မိုးစာရွက်စာရွက်၏ပုံမှန် linear ချဲ့ထွင်ခွင့်ပြုပါရန်အလို့ငှာည 0.0000493 / ℃၏ linear ချဲ့ထွင်တဲ့ကိန်းရှိပါတယ်, ကျနော်တို့ဝက်အူ၏ထက်ပိုကြီး 2-3mm အချင်းတွေနဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်တူး, ပြီးတော့ရန်ပြုပြင်တာတွေလုပ်ဖို့အကြံပေး အဆိုပါ sheet.Please မဆို dilatation ရှောင်ရှားလွန်းတင်းကျပ်စွာကိုပြုပြင်တာတွေလုပ်မရကြပါဘူး။
ပင်မ Tile ၏ installation
မှန်ကန်သော alignment ကိုသာဒီစာရွက်များအဆိုပါဒေါင်လိုက်လိုင်းအောက်ခြေ purlin 50 ~ တစ် gabled ခေါင်မိုးများအတွက်ဘေးနံရံ၏အတွင်းပိုင်းမှ 70mm နှင့်အလျားလိုက်လိုင်း 150mm ဖြစ်သင့်နီးကပ်စွာနှင့်ရိုးစင်းစွာစုဝေးနိုင်ပါတယ်ခေါင်မိုးဖွဲ့စည်းပုံ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စအလွန်အရေးကြီးပါသည် ။
အဘယ်သူမျှမအခြေအနေများအောက်တွင် perforated ရမည်ဖြစ်သည်အဆိုပါထောက်ပံ့ framework.The ပထမဦးဆုံးအတန်းနှင့်အညီ, ဒုတိယဒေါင်လိုက်အတန်း၏ပထမဦးဆုံး tile ကိုပေါ်သို့ fix, ဒေါင်လိုက်ဆောက်လုပ်ရေးလိုင်းမှတတ်နိုင်သမျှနီးစပ်ပထမဦးဆုံးစာရွက်ချထားပါ။
Fixings tile ကို၏လှိုင်းမောက်မှာစုဝေးစေရပါမည်။
အထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်မှုပထမဦးဆုံးအတန်း align လုပ်ဖို့သည့်အခါရှည်လျားသောစာရွက်များပေါ်တွင်အသီးအသီးစာရွက်များအတွက်အနည်းငယ်မီလီမီတာ၏တောင်ချွတ်နံရံပြဿနာများဖန်တီးနိုင်သောကြောင့်, ယူခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ထို့နောက်ဒုတိယပြုပြင်တာတွေပြုပါပထမဦးဆုံးပေါ်သို့နောက်ပိုင်းတွင်ဒုတိယစာရွက်ထပ်နှင့်ထပ်တူကိုက်ညီသောပထမဦးဆုံးအနိမ့်ဆုံး tile ကိုအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို screw နှစ်ခုနှင့်အတူဖြေရှင်းမှပေါ်သွားပါ။
ကျနော်တို့ကတံကျင်၏အစွန်းရောက်ဖို့ fixed ရည်ညွှန်းတစ်လိုင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုအဆိုပါ fixings များ၏မှန်ကန်သော alignment ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။
သည်အခြား tile ကိုအပေါ်ကို fix ဖြစ်လျှင်, တတိယနှင့်ထွက်စာရွက်များအားဖြင့်ထိုအတူလမ်းအတွက် Continue နှင့်လေးခုစာရွက်များ၏အခြေအနေပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။
လိုအပ်ခဲ့လျှင်, နောက်ဆုံးတဦးတည်းသည်အထိအတူတူပင်လမ်းအတွက်စာရွက်များ, စည်းဝေးနောက်ဆုံးစာရွက်ရဲ့ width အညီအဖြတ်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။
ဒုတိယအတန်းများအတွက်ငါတို့ကဲ့သို့အစဉ်အမြဲသင့်ကိုထက်ဝက် lengthways အတွက်ဖြတ်သောစာရွက် (အုပ်ကြွပ်၏သုံးတန်း) အားဖြင့်သင်တို့ကိုရှိခြင်းအတန်းတစ်အလျားလိုက်ထပ်နှင့်အတူဆက်လက်ခွင့်ပြုထားနှင့်ကဲ့သို့သောသင်တစ်ဦး crossover ကိုရှောင်ကြဉ်နှင့်အတူလက်ဝဲကနေစတင်ကြောင်းအကြံပြု ထပ်ပေါ်လေးစာရွက်များ၏။
အဆိုပါခေါင် tile ကိုစုဝေးနိုင်ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးသူတို့နှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာအုပ်ကြွပ်၏ဒေါင်လိုက်တန်းတက်ချထားပြီးပါ။
အာရုံစူးစိုက်မှု, အနိမ့်လျှောစောက်သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်လေထန်သို့မဟုတ် rainly ဇုန်၌ဗဓေလသစ် sealant သို့မဟုတ်ဆီလီကွန် sealant အားဖြင့်ထပ်တူတံဆိပ်ခတ်ထားရန်သင့်လျော်သည်။
ထောင့်ဖြတ်ခေါင် asesemble ဖို့တင်ပါးဆုံရိုးလိုင်းတစ်လျှောက်စာရွက်များ Cut
ခေါင် tile ကို၏ installation ကိုပထမဦးဆုံး tile ကို side.For တဦးတည်းအနေဖြင့်စတင်သင့်တယ်, သူကတစ်ဝက်ထပ်ပေါ်လေး sheet ရဲ့ crossover ရှောင်ရှားရန်အဖြတ်ခံရသင့်ပါတယ်။
75mm ၏အရှည်နှင့် 6.3mm ၏အချင်းနှင့်အတူ self-screw နှစ်ခုအစွန်းမှအနီးရှိခေါင် fix ဖို့မထို့ကြောင့်စိမျ့ပြဿနာများရှိသည်မဟုတ်အဓိက tile.Take စောင့်ရှောက်မှုသို့ခေါင် tile ကို fix ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ထောင့်ဖြတ်ခေါင်၏ installation လုပ်ဖို့ကြောင့် 75mm နဲ့ 6.3mm ၏အချင်း၏အရှည်နှင့်အတူတင်ပါးဆုံရိုး line.Self-screw နှစ်ခုနှင့်အတူဖြောင့်ထားရန် aligned ရပါမည်အဓိက tile.Diagonal ခေါင် tile ကိုဖို့အကြံအဖန်တွေချည်းအနားတပ်ဆင်ရမည်ကို fix ဖို့လိုအပ် အောက်ခြေကနေ 50mm တစ်ခုထပ်နှင့်အတူထိပ်ဆုံးရန်။
တစ်ဦးကသုံးလမ်းချိတ်ဆက် linear ခေါင်နှင့်လေးဆင်ခြေလျှောအမိုးများအတွက်ထောင့်ဖြတ်တဦးတည်းအကြားပူးပေါင်းဒြပ်စင်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
နှစ်ခုစုဆုံကွင်းပူးပေါင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပါနေရဆဲအဆိုပါ valley.Position ခေါ်နှစ်ခုအပြိုင် strips တွေ, အနေရဆဲ၏ဗဟိုကနေ 240 မီလီမီတာ, ချိုင့်နေရဆဲဖို့အပြိုင် fix ဖြစ်ပါတယ်။
Self-screw နှစ်ခုသို့မဟုတ်လက်သည်းသုံးပြီး strips တွေပေါ်ဓာတုဗဓေလသစ် panel ကိုသို့မဟုတ်သတ္တုရာ၌ချိုင့်ဝှမ်းမြောင်း fix ။
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးချိုင့်ဝှမ်းလိပ်ကိုလည်း Self-screw နှစ်ခုသို့မဟုတ်လက်သည်းသုံးပြီး strips တွေပေါ်ချိုင့်ဝှမ်း၏အစွန်းရောက်အနား fix ဖို့ slab.Begin အပေါ်ဂရုတစိုက်ချ setting, အခေါင် line ကနေစတင်ထောင့်အပေါ်ချိုင့်ဝှမ်း gutter.Position ကြောင့်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
ချိုင့်လိုင်းမှသက်ဆိုင်ရာအဆိုပါစာရွက်များ positioning ကိုမပြုမီ pre-shaped, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးဿုံဖြောင့်ချိုင့်ဝှမ်းလိုင်းရှိသည်ဖို့, ပြုပြင်တာတွေပြီးနောက်နောက်တဖန်သူတို့ကိုဆွဲထားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေထွက်ခွာရမည်ဖြစ်သည်။
Self-screw နှစ်ခုသို့မဟုတ်လက်သည်းများကနံရံနဲ့အုပ်ကြွပ်ဖို့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကပ်နှင့်ဆီလီကွန် sealant နှင့်အတူမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်၏မြင့်မားဆုံးကိုတံဆိပ်ခတ်ထားလော့, Shengyu ဗဓေလသစ် panel ကိုသို့မဟုတ်သတ္တုအတွက်လုပ်ဖလက်ရှ်ဘေးနံရံများကိုအသုံးပြုပါ။
Shengyu ဗဓေလသစ် panel ကိုသို့မဟုတ်သတ္တုအတွက်လုပ်အသုံးပြုမှုဘေးနံရံမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, Self-screw နှစ်ခုသို့မဟုတ်လက်သည်းများကနံရံနဲ့အုပ်ကြွပ်ဖို့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကပ်နှင့်ဆီလီကွန် sealant နှင့်အတူမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်၏မြင့်မားဆုံးကိုတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။
, ဒြပ်စေးသို့မဟုတ်သတ္တု Flash ကိုသုံးပါ Self-screw နှစ်ခုသို့မဟုတ်လက်သည်းများကနံရံနဲ့အုပ်ကြွပ်ဖို့မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကပ်နှင့်ဆီလီကွန် sealant နှင့်အတူမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်၏မြင့်မားဆုံးကိုတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။ (အထကျကားချပ်ကိုကြည့်ပါ)
Flash သတ္တုဘုတ်အဖွဲ့က site ကိုမှာလုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်, မီးခိုးခေါင်းတိုင်များမိုးကွင်းနှင့်အနေအထားကွဲပြားခြားနားသောခေါင်မိုးများအတွက် variable ကိုဖြစ်သကဲ့သို့။
လူမီနီယမ်သို့မဟုတ်သွပ်ရည်စိမ်လိပ်လက်သည်းများက chimney ထို့နောက်ပိုမိုမြင့်မားဆုံးကိုတံဆိပ်ခတ်ထားဖို့အားလုံးကိုလိပ်၏ chimney.Fix အခြားအဆုံးပတ်လည်မှာအုပ်ကြွပ်နှင့် chimney.Stick အကြားဆက်သွယ်မှုဟာစာရွက်များဖို့လိပ်အတွက်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Polish သို့မဟုတ်တစ်ခရီးဆောင်ပါးလွှာ-သွားလွှအတူစာရွက်ပေါ်တစ်ခုအတိအကျကို slot က်ဖြစ်စေလျက်, လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး၏အတိအကျတိုင်းတာယူပါ။
အဆိုပါ tile စာရွက်ပေါ်တွင်အနိမ့်ကွန်နက်ရှင်အဘို့အဦးဆောင်ပတ္တာထပ်နှင့်ကောင်းစွာစာရွက် fit မှသင်တို့လက်နှင့်အတူကပုံဖော်။
ထို့နောက်ယုတ်ညံ့ element တွေကိုလသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး၏အောက်ပိုင်းဘက်မှာဦးဆောင်ပတ္တာ၏စှအတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ခြမ်းနှင့်အထက်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ထပ်တူဖို့ကောင်းစွာကသင့်လျော်သည့်ပုံစာရွက်ထားပါ။
ထောင့်ဖြတ်ခေါင်၏စည်းဝေးပြီးသွားပြီးနောက်ထောင့်ဖြတ်ခေါင်၏အောက်ခြေအဆုံးသို့ terminal ကိုထောင့်ဖြတ်ခေါင်အပိုင်းအစထည့်သွင်းခြင်း, rivets အားဖြင့်ထောင့်ဖြတ်ခေါင်မှ fix ။
အိမ်ခေါင်မိုးများအတွက် Fiber စာရွက်
ဖန်မျှင်ထည်လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေး Sheet များ
Long က Span ခေါင်မိုးစာရွက်
မော်ဒန်, Classical ခေါင်မိုး Tile
multi အရောင် PVC ခေါင်မိုးစာရွက်
လွင်ပြင်အမျိုးအစားဝါးခေါင်မိုး Sheet များ
ပလပ်စတစ်ဂိုဒေါင်ခေါင်မိုး Sheet များ
ပလတ်စတစ် သွန်းလောင်းများအတွက် PVC ခေါင်မိုးစာရွက်
PVC ပလတ်စတစ်ခေါင်မိုး Tile
PVC ခေါင်မိုး Tile
ခေါင်မိုး Sheet များစာရွက်စျေးနှုန်း
မိုးမိုးအခါရေယုံ Sheet များ
Trapezoidal စတိုင် ခေါင်မိုး Tile
Wave ကိုခေါင်မိုးအခါရေယုံ Sheet များ
အဖြူရောင်ဖန်မျှင်ထည် Sheet များ
ဒြပ် ASA ဗဓေလသစ်ခေါင်မိုးစာရွက် RY720-တစ်ဦးက